Hlawga National Park – hlawgapark
WELCOME TO INCREDIBLE	 EXPERIENCE ON HLAWGA PARK
လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံး နေရာများ
လှော်ကားဥယျာဉ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအစီစဉ်များထဲမှ တခုဖြစ်သော တောတွင်းလမ်း လျှောက်ခြင်းအစီစဉ်လေးရှိပါတယ်။ တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းကို အထူးသဖြင့် အဖွဲ့လိုက်လာရောက် ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး တောတွင်းအတွေ့အကြုံရယူလိုသူများနှင့် သစ်တော်သစ်ပင်များလေ့လာလိုသူများ အတွက် အစီစဉ် ကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ တောတွင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းကို စခန်း(၁)မှ စတင်တာဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် တောတွင်းသို့ဖြတ်ကာ လျှောက်လမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးဝေးဝေးသွားဖို့ကလည်း အချိန်လုံလောက်မှုမရှိသလို ခရီးလေးသွားလိုက်ရသလို ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ အပန်းဖြေလိုသူတွေအတွက် လှော်ကားဥယျာဉ်ရဲ့ ဘန်ဂလိုလေးမှာ အပန်းဖြေဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ သဘာဝတောအုပ်လေးထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့...
Private Tour! မြို့ပြနဲ့သိပ်မဝေးလှပဲ သဘာဝရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို အပြည့်အဝခံစားလို့ရမယ့် နေရာလေးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့လှော်ကားဥယျာဉ်ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ လှော်ကားဥယျာဉ်ရဲ့ Private Tour အစီအစဉ်လေးကတော့...